﻿Komputermen စာမျက်နှာ 2
Microsoft က software ကိုဧရာယခုနှစ်တတိယသုံးလပတ်များအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ထိုကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲမှု, ဒါပေမယ့်လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်ကျွမ်းကျင်သူများကသာအားရနှစ်သက်သုံးလတစ်ကြိမ်အစီရင်ခံစာ။ နောက်ဆုံးသုံးလပတ်၏အဆုံးမှာကုမ္ပဏီ၏အမြတ်ငွေ 62 ဆင့်၏ရှယ်ယာနှုန်း, 5,24 ဘီလီယံတိုးတက်လာခဲ့သည်။ နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်တူညီကိန်းဂဏန်း 4,47 ဘီလီယံ, ဒါမှမဟုတ်ရှယ်ယာနှုန်း 53 ဆင့်မှာရပ်နေ၏။ ဒါ့အပြင်သိသိသာသာတိုးမြှင့်ခြင်း, သုံးလတစ်ကြိမ်ဝင်ငွေ & ndash;
အဘယျသို့အသေခံအပြာရောင်မျက်နှာပြင် (BSOD) အပေါ်ပြသ | Windows ကိုစွယ်စုံကျမ်း
kernel ကိုအဆင့်နှင့်အသုံးပြုသူအဆငျ့: Windows ကို operating system ကိုနှစ်ခုအဓိကအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါအသုံးပြုသူအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ဟာ့ဒ်ဝဲ access နှင့်တိကျသောလိပ်စာအာကာသအတွင်းကန့်သတ်သည်မဟုတ်နိုင်ပါ။ အသုံးပြုသူအဆင့်အထိပြုပြင် mode ကို3(နိမ့်ဆုံးဦးစားပေး) ။ အသုံးပြုသူ-Level အစီအစဉ်တစ်ခုအမှားမှဦးဆောင်နေလျှင်, Window program ကိုအဆုံးသတ်နှင့် error message ကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ program ကို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လိပ်စာအာကာသအတွင်းပြေးကတည်းကကြောင့်အခြားအစီအစဉ်များကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်။ အောက်ပါအစိတ်အပိုင်းများကိုအသုံးပြုသူ mode မှာလည်ပတ်: မှတ်ပုံတင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု;
အကိုအနိုင်ပေးဝန်ဆောင်မှု၏ဖော်ပြချက် | Windows ကိုစွယ်စုံကျမ်း
IP လိပ်စာများမှ NetBIOS နာမည်တွေပြောင်းယခင်ကအသုံးပြုဝန်ဆောင်မှုကိုအနိုင်ပေး။ အကယ်.
6 ထင်မြင်ချက်များ သင်မိုဃ်းတိမ်၌လုံလောက်တဲ့သိုလှောင်မှုကိုအာကာသရှိသည်ဘယ်တော့မှ အကယ်.
ရုံးက 2010 ခုနှစ် applications တွေကိုသုံးပြီး screenshots များယူလုပ်နည်း | 2013 ခုနှစ်
Office ကို 2010 ခုနှစ်ထငျရှားသောအင်္ဂါရပ်များတစ်ခုမှာသင် screenshots များယူနှင့်သင်တို့ပြုရသောမှတဆင့် Word, Excel, နဲ့ PowerPoint တင်ပြချက်များ (လျှောက်လွှာပေါ် မူတည်.
Wi-Fi ကို LG Optimus L4 အပေါ်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး | ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
Windows ကို Threshold အဆင့်မြှင့်, ကို "Start ကို"
code အမည် Threshold (Windows ကို 8.